arthasansartalk - Arthasansar
तुलशीराम ढकाल इन्भेस्टर्स फोरमको अध्यक्षमा निर्वाचित भएका छन् । इन्भेष्टर्स...
१५ बर्षमा यसरी कमाउन सकिन्छ करोडः डा. केशव श्रेष्ठसँग हाइब्रिड लगानीबारे कुराकानी
डा. केशव श्रेष्ठ लगानी ब्यवस्थापन विज्ञ हुन् । उनले ब्यवस्थापन विषयमा विद्याबारिधि गरेका छन् । ...
आइतबार, ३१ साउन २०७८, १० : ४६
नियामकले सर्बोत्तम सिमेन्टको सेयर किन्नु अनैतिक होः वित्त विश्लेषक बस्यालसँग कुराकानी
हेमन्त बस्याल पेशाले वित्त विश्लेषक हुन् । उनी लगानी गर्न चाहनेहरुलाई कुन क्षेत्रमा लगानी गर्दा राम्रो प्रतिफल लिन सकिन्छ भनेर सल्लाह दिन्छन् । ...
आइतबार, २४ साउन २०७८, ०८ : ४७
करोडभन्दा बढी डाउनलोड हुने एप कसरी बन्यो ? डेभलपर शंकर उप्रेतीसँग कुराकानी
नेपाली एप्सका १ करोडभन्दा बढी प्रयोगकर्ता । ...
आइतबार, १७ साउन २०७८, ०० : ००
नेशनल हाइड्राेपावर कम्पनी लिमिटेल भनेपछि एक समय सुसासनमा निकै कमजाेर कम्पनीका रूपमा चिनिन्थ्याे । ...
शनिबार, ०२ साउन २०७८, १७ : १३
अहिले बजार घटेको अवस्था सेयर खरिदका लागि भने सुनौलो मौका रहेको बताउछन् सेयर विश्लेषक तथा प्रशिक्षक सन्दिप कुमार चौधरी । ...
बुधबार, २३ असार २०७८, २० : ४५
सेयर बजारमा पछिल्लो समय केही नकारात्मक समाचारहरु आए । ...
आइतबार, २० असार २०७८, १३ : ०५
विष्णुप्रसाद बस्याल लामाे समयदेिख बजारकाे विश्लेषण गर्दै आएका छन् । बजारमा लगानी गर्न चाहनेहरूलाई सल्लाहसमेत दिँदै आएका बस्याले अहिलकाे बजारकाे घटाइलाई स्वाभाविक मान्छन् । ...
शनिबार, १२ असार २०७८, ११ : ३८
बजारमा धितोपत्र ब्यवसायी (ब्रोकर) हरु ५० को संख्यामा छन् । ब्रोकर ब्यवसाय गर्न कसैले चाहेर पनि सजिलै अनुमति पाउँदैन । त्यति संख्यामा ब्रोकरले अनुमति पाएको बषौं भइसक्यो । कारोबार रकम...
शनिबार, ०५ असार २०७८, १० : ४५
अहिलेको सेयर बजार पैसा कमाउने सबैभन्दा ठूलो मौका रहेको उर्जा विकास परिषदका अध्यक्ष एवमं नेपालका पुराना ठूला लगानीकर्ता ज्ञानेन्द्रलाल प्रधानले बताएका छन् । ...
आइतबार, २३ जेठ २०७८, ०० : ००
नेपालका सूचिकृत कम्पनीहरूकाे लाभांश नीति उपयुक्त नभएकाे वित्तीय अर्थशास्त्री तथा सेयर विश्लेषक मुक्ति अर्यालले बताएका छन् । ...
शनिबार, ०८ जेठ २०७८, १२ : २३
घरजग्गा कारोबारमा जमेका थिए नवराज घिमिरे । दुई दशकअघि उनी एकाएक आइपिओमा लगानी गरेर सेयर बजारमा प्रवेश गरे । ...
शनिबार, १८ बैशाख २०७८, ११ : ५२
नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक लिमिटेडको सहायक कम्पनी एनआईबिएल एस क्यापिटलले यही बैशाख १३ गतेबाट एनआईबिएल समृद्धि फण्ड २ नामको म्युचुअल फण्ड निस्कासन गर्दैछ । ...
शनिबार, ११ बैशाख २०७८, ०९ : २९
बजारमा चल्ने हल्लाहरूको पछाडी नलागी लगानी गर्ने हो भने सेयर बजार आम्दानीको राम्रो श्रोत रहेको नेपाल पुँजीबजार संघकी अध्यक्ष तथा लगानीकर्ता संरक्षणा चौधरीले बताएकी छिन् । ...
आइतबार, २९ चैत्र २०७७, ११ : १२
मेरो सेयरमा आएको समस्या समाधान गर्न निरन्तर लागिएको सिडिएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पूर्णप्रसाद आचार्यले बताएका छन् । ...
शनिबार, २१ चैत्र २०७७, १० : १७
अरुण भ्याली हाइड्रोपावर कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक रमेशप्रसाद न्यौपानेले नेपाल बिद्युत प्राधिकरणले आफ्नो दायित्व बहन गर्न नसकेको बताएका छन् । ...
सोमबार, १६ चैत्र २०७७, ०० : ००
सेयर लगानीकर्ता संघ नेपालका अध्यक्ष उत्तम अर्यालले सेयर बजारमा लगानी गर्दा नेप्सेको इन्डेक्स हेरेर भन्दा पनि आफूले लगानी गर्ने कम्पनीको प्राविधिक र आधारभूत पक्षहरुको ...
शनिबार, २२ फागुन २०७७, १२ : ४८
केमा लगानी गर्दा धेरै प्रतिफल पाउन सकिएला लगानी ब्यवस्थापन विज्ञ डा.केशव श्रेष्ठ राम्रो मुनाफा कमाउन लगानीका औजार बजारमा पर्याप्त रहेको बताउँछन् । बुद्धि पुर्याएर लगानी गर्ने हो भने १५ बर्षमा...
आइतबार, १६ फागुन २०७७, १४ : २८
काेराेना भाइरस संक्रमणकाे त्रासले ठप्प रहेकाे बजारमा केही चहलपहल सुरू भएकाे छ । बजारलाई चलायमान बनाउन फुटवेयर म्यानुफ्याक्चरर्स एसोसिएशन अफ नेपालले ...
शनिबार, २४ माघ २०७७, ०८ : १३
तपाइँ सेयर किन्दा कम्पनीकाे कुन कुरा हेर्नु हुन्छ ? कतिपय लगानीकर्ता कम्पनीकाे आ धारभूत विश्लेषण गरेर लगानी गर्छन् । कति भने कम्पनीकाे प्राविधिक कुराहरूकाे विश्लेषण गर्छन् । धेरैलाइ लाग्छ, कम्पनीकाे...
शनिबार, १७ माघ २०७७, १० : १५
नेपाल धिताेपत्र बाेर्डका अध्यक्ष भिष्मराज ढुंगानाले नेपालमा अर्काे स्टक एक्स्चेन्जकाे आवश्यकता टड्काराे देखिएकाे बताएका छन् । ...
शनिबार, १० माघ २०७७, १५ : ००
सेयर बजार निरंरत उकालाे लगिरहेकाे छ । बजार अझै कति बढ्ला ? सबैकाे चासाे छ । यही प्रश्न हामीले सेयर बजारकाे विष्लेषण गर्दै आ एका कञ्चनकृष्ण न्याैपानेलाई साेधेका थियाैं ।...
आइतबार, २६ पुस २०७७, ०६ : ०६
ब्रोकर कमिसन अचाक्ली भयो, आधा घटाउनुपर्छः इन्भेस्टर्स फोरमका अध्यक्ष रौनियारसँग कुराकानी
अर्थ संसार, काठमाडौं - छोटेलाल रौनियार इन्भेस्टर्स फोरमका अध्यक्ष । लामो समय गार्मेन्ट उद्योगमा जमेका रौनियार पछिल्लो समय एक लगानीकर्ता, लगानीकर्ताको नेता र सेयर बजारको विस्लेषकको परिचय बनाएका छन् ।
सोमबार, २२ मंसिर २०७७, ०७ : ०२
रिडी हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेडले रूपन्देहीमा नेपालको पहिलो र सवैभन्दा ठूलो सौर्य विद्युत आयोजना निर्माण सम्पन्न गरेको छ । ...
मंगलबार, २५ कार्तिक २०७७, १७ : १३
अर्थ संसार, काठमाडौं - एकै दिन सत्र वटासम्म पब्लिक कम्पनीकाे साधारणसभामा सहभागी भएर कम्पनीले गरेका अनियमितता विरूद्ध चर्काे आवाज उठाउँदै आएका डमरुबल्लभ घिमिरे काेराेना महामारीका कारण फुर्सदिला भएका छन् ।
विहीबार, २० कार्तिक २०७७, ०७ : ००
अर्थ संसार, काठमाडौं - अपि पावर कम्पनी लिमिटेडले हकप्रद सेयर जारी गरिरहेकाे छ । ...
शुक्रबार, १४ कार्तिक २०७७, १२ : ०८